Haddaba soo jeeda! - Book of Alexander Grenehed | Apg29
Haddaba soo jeeda! - Book of Alexander Grenehed
Hadda waxaan daabacay buug iigu horeysay, "Haddaba soo jeeda!"
Iyadoo 263 pages buug ee, waxaan jeclaan lahaa, iyadoo Qorniinku badan Swedish Dadka Bible ka soo daabacan, fiiqaya in ay waxa erayga Ilaah leeyahay oo ku saabsan waqti yar oo ugu dambaysa ee la xidhiidha Ciise yimid.
Waxaan jeclaan lahaa in dadka kale waa in ay helaan faham weyn ee si qoto dheer kitaabiga ah iyo cashuurta qaab la fahmi karo in this topic badan.
By helitaanka fudud wax sii sheegidda Bible iyo siraha aan dhab ahaan ka heli kartaa aqoon dheeraad ah oo ka mid ah waxa dhacaya.
waxaan oo dhan uma uu jawaabi karo, laakiin calaamad su'aal qaar ka mid toosan, halka qaar ka mid ah dhibcood la yaabka noqdo su'aal ah.
Imtixaanka iyo jilayaal
Kanuna iyo nebigii beenta ahaa
The laba markhaati
Tan iyo markii aan aan ahay qoraa caan ah, si xor ah u kuwa kale u sheeg oo ku saabsan buugga, gaar ahaan haddii aad u akhri oo u malaynayaa in ay tahay wax ay ku leeyihiin.
Dalbo kitaabkii via email: alexgrenehed@gmail.com
Ku qor magacaaga iyo cinwaankaaga.
Bixi swish on 0705130619
Haddii aadan sidaa yeelin swish, sidaas awgeed, fadlan u sheeg marka aad dalban.
Price 100 karoon + 50 maraakiibta karoon / buugga
(Haddii aad ku nooshahay Örebro aan boostada si toos ah in aad boostada)
Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 00:50